A Hydrocort (အေ ဟိုက်ဒရိုကော်တီစုန်းလိမ်းဆေး) - Hello Sayarwon
A Hydrocort (အေ ဟိုက်ဒရိုကော်တီစုန်းလိမ်းဆေး)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » A Hydrocort (အေ ဟိုက်ဒရိုကော်တီစုန်းလိမ်းဆေး)
A Hydrocort (အေ ဟိုက်ဒရိုကော်တီစုန်းလိမ်းဆေး) ကဘာလဲ။
Generic Name: A Hydrocort (အေ ဟိုက်ဒရိုကော်တီစုန်းလိမ်းဆေး) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
A Hydrocort (အေ ဟိုက်ဒရိုကော်တီစုန်းလိမ်းဆေး) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ကော်တီကွိုက်ဖြစ်ပြီး အောက်ပါအမျိုးမျိုးသောအရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းတွေအတွက် သုံးနိုင်ပါတယ်။
နှင်းခူရောဂါ- အရေပြားထိပ်များ၊ ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ၊ ဒင်္ဂါးပုံစံ၊ အခြေနေအတည်ြငိမ်ခြင်း
အရေပြားရောင်ခြင်း – တခြားအကြောင်းအရင်းမရှိဘဲရောင်ခြင်း၊ ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ အဆီများခြင်း
A Hydrocort (အေ ဟိုက်ဒရိုကော်တီစုန်းလိမ်းဆေး) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း တိတိကျကျအသုံးပြုပါ။ ဆေးညွှန်းစာမှာပါတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကို နားမလည်ဘူးဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
မသုံးခင်နဲ့ အသုံးပြုပြီးမှာ သင့်ရဲ့လက်ကိုဆေးကြောသန့်စင်ပါ။
A Hydrocort (အေ ဟိုက်ဒရိုကော်တီစုန်းလိမ်းဆေး) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
ဆေးမပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ဖို့ ရေချိုးခန်းရေခဲသေတ္တာစတာတွေထဲမှာ မသိမ်းသင့်ပါဘူး။ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ပုံစံတွေလည်း ကွဲနိုင်ပါတယ်။ ဆေးညွှန်းမှာပါတဲ့အတိုင်း သေချာသိမ်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးဝေးမှာ ထားသင့်ပါတယ်။
ရေမြောင်းတွေအိမ်သာစတာတွေထဲကို ညွှန်ထားထားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် သွန်ပစ်ခြင်းမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့နေ့ရက်ကျော်သွားပြီဆိုရင် သို့ ်မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင် သေချစွန့်ပစ်သင့်ပါတယ်။ ဘယ်လိုစိတ်ချလက်ချစွန့်ပစ်နိုင်လဲဆိုတာတွေကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
A Hydrocort (အေ ဟိုက်ဒရိုကော်တီစုန်းလိမ်းဆေး) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အခြားဆေးများ၊ အစားအစာများ၊ ဆိုးဆေးများ၊ တာရှည်ခံအောင်ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းများ၊ တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့ရင်
ကူရှင်းရောဂါစု ( အဒရီနယ်ဂလင်းဖောက်ပြန်ခြင်း)
ဦးနှောက်သွေးယိုခြင်း ( ဦးခေါင်းအတွင်းဖိအားများခြင်း)
ဆေးလိမ်းသည့်နေရာနှင့် အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်း
ဆေးလိမ်းသည့်နေရာတွင် အနာများ၊ အရေပြားကွဲခြင်း၊ ပြင်းထန်သောအရေပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ A Hydrocort (အေ ဟိုက်ဒရိုကော်တီစုန်းလိမ်းဆေး) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
A Hydrocort (အေ ဟိုက်ဒရိုကော်တီစုန်းလိမ်းဆေး) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဟိုက်ဒရိုကော်တီစုန်းလိမ်းဆေးကြောင့် အောက်ပါအရေပြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပေါက်ပြဲခြင်း၊ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်ခြင်း၊ မာခြင်း၊ ခြောက်ခြင်း၊ အရေပြားကွာကျခြင်း
ယားခြင်း၊ အရေပြားအကြေးခွံထခြင်း၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရောင်ခြင်း၊ အနာဖြစ်ခြင်း၊ အရေပြားရောင်ခြင်း
အရေပြားပါးပြိး အလွယ်တကူပေါက်ပြဲခြင်း၊ အထူးသဖြင့်မျက်နှာပေါ်အသုံးပြုသည့်အခါမျိုး၊ အရေပြားအခေါက်နှစ်ခုကြား ( လက်ချောင်းကြားနေရာများ)
ပိန်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ အရေပြားကွာကျခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက A Hydrocort (အေ ဟိုက်ဒရိုကော်တီစုန်းလိမ်းဆေး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က A Hydrocort (အေ ဟိုက်ဒရိုကော်တီစုန်းလိမ်းဆေး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက A Hydrocort (အေ ဟိုက်ဒရိုကော်တီစုန်းလိမ်းဆေး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကို သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ကျန်းမာရးအခြေအနေပိုဆိုးသွားတာမျိုး ဆေးအာနိသင်ပြောင်းသွာတာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လတ်တလောကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေ မှန်သမျှကို
သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေကို ပြောပြထားသင့်ပါတယ်။
ဆေးလိမ်းသည့်နေရာတွင် အနာများ၊ အရေပြားကွဲခြင်း၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် A Hydrocort (အေ ဟိုက်ဒရိုကော်တီစုန်းလိမ်းဆေး) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ခရင်မ်လိမ်းဆေး- ဖြစ်ပွားသည့်နေရာတွင် တစ်နေ့၂ကြိမ်၃ကြိမ် လိမ်းပေးပါ။
လိုရှင်း- ဖြစ်ပွားသည့်နေရာတွင် တစ်နေ့၂ကြိမ်၄ကြိမ် လိမ်းပေးပါ။
လိမ်းဆေး – ဖြစ်ပွားသည့်နေရာတွင် တစ်နေ့၂ကြိမ်မှ ၄ကြိမ် လိမ်းပေးပါ။
အရည်လိမ်းဆေး- ဖြစ်ပွားသည့်နေရာတွင် တစ်နေ့၃ကြိမ် ၄ကြိမ်လိမ်းပေးပါ။
ကလေးတွေအတွက် A Hydrocort (အေ ဟိုက်ဒရိုကော်တီစုန်းလိမ်းဆေး) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
A Hydrocort (အေ ဟိုက်ဒရိုကော်တီစုန်းလိမ်းဆေး) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
လိမ်းဆေး၊ ခရင်မ်၊ လိုးရှင်း၊ အရည်ပုံစံ – 0.5%, 1%, 2.5%
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောက်တိုဘာ 28, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇန်နဝါရီ 25, 2018
Hydrocort. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/24101. Accessed September 6, 2016.
Hydrocort. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/hydrocortisone-topical-application-route/description/drg-20073814. Accessed September 6, 2016.
Hydrocort. http://www.webmd.com/a-to-z-guides/common-topics/default.htm. Accessed September 6, 2016.
Atopic Dermatitis (နှင်းခူရောဂါ)